OJM: Mitohy ny fandraisana ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiana – Depeche TARATRA
Accueil/Politique/OJM: Mitohy ny fandraisana ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiana
Feno telo andro androany ny nanokafana ny fandraisana ny antontan-taratasin’izay vonona hirotsaka hofidina ho filohan’ny Holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara.
Etsy amin’ny efitrano Gisèle Rabesahala, ao amin’ny tranombokimpirenena Anosy no anaterana izany, izay tsy hifarana raha tsy amin’ny 30 Septambra izao. Mbola tsy misy antotan-taratasy filatsahan-kofidina voaray hatramin’ity andro fahatelo ity, hoy ny vaomiera itambarana isasahana foibe (CPC). Ny 1 hatramin’ny 14 oktobra no fotoana ahafahana manao ny fampielezan-kevitra araka ny tetiandro nivoaka. Natokana ho fahanginana mialoha ny fifidianana (silence éléctorale) ny 15 oktobra. Ny 16 oktobra araka izany no hanatontosana ny fifidianana.
Misokatra ho an’ny mpanao gazety rehetra mahafeno ny fepetra napetraka ny filatsahan-kofidina. Lisitra tokana ahitana olona 93 no fidina, izany hoe misy filoha 1, filoha lefitra 23 (iray isaky ny faritra), manana lefitra (vice president supléant) iray avy izy 23 ireo, mpanolotsaina 1 isam-paritra miampy mpanolotsaina mpanampy iray avy. Raha tsy mahafeno ireo lisitra ireo dia tsy mahafeno ny fepetra. Ankoatra izay, anto-bola 200 000 ariary no aloa ho an’ny filoha, 150 000 ariary ho an’ny filoha lefitra 23, ary 100 000 ariary ho an’ny mpanolotsaina tompon-toerana. Arotsaka amin’ny kaonty manokana amin’ny banky BOA io vola io, ikarakarana ny fifidianana; ary mijanona ao amin’ny kitapom-bolan’ny holafitra izay vola tsy lany eo.
Ny mpanao gazety matihanina tafiditra anaty lisitra navoakan’ny Vaomiera itambarana isasahana foibe (CPC) no mpifidy. Tsy maintsy mahazo ny antsasa-manilan’ny vato manankery vao lany ny filoha. Raha latsaky ny 50% dia tsy maintsy miroso amin’ny fiodinana faharoa. Didim-pitondrana no nametraka ity vaomiera itambarana isasahana ity. Olona 7 no voatokana handrafitra azy: solon-tena 3 avy amin’ny holafitry ny mpanao gazety, 1 avy amin’ny vondron’ny mpanao gazety zokiolona, 2 avy amin’ny lehibena orinasan-gazety, ary 1 avy amin’ny ministera. Saingy tsy nandefa ny solon-tenany ny holafitra.
Hahitana vaomiera itambarana isasahana koa eo anivon’ny faritra (CPR), izay hisahana ny fifidianana.
Hatsangana eny Ivato ny tanànan'ny hai-tao na "cité des métiers"
Sénat: 8 projets de loi y seront examinés
Yoshi Higuchi: mon pays continuera à appuyer la UNFPA Madagascar
Tsy maintsy asiana fanatsarana eo anivon’ny minisiteran’ny Fampiroboroboana sy ny fanovàna ny haitao ara-kajy mirindra, ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra
Filoha Rajoelina : tokony homena andraikitra bebe kokoa ny Governora